Özgeçmiş Hazırlama / Manomana tohiny – Diyaloglar | OpenTran
Özgeçmiş Hazırlama / Manomana tohiny – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Özgeçmiş Hazırlama / Manomana tohiny – Diyaloglar
Jack Holden: Faly aho mahita anao, Adam. Matetika i Linda rahavaviko no miresaka momba anao.
Adam Dubinsky: Faly aho mahita anao, Jack.
Jack: Ka dia olom-baovao avy any Russia ianao. Elaela no nijanonanao tany New York?
Adam: 10 volana no niainako teto.
Jack: Tianao ve ny mipetraka eto?
Adama: Ie, izany tokoa aho. Tanàna mahavariana i New York.
Jack: manana asa ve ianao?
Adama: Eny, izany aho. Nefa tantara mampalahelo izany. Injeniera elektronika tsy misy traikefa amerikana aho izao. Mpamily fiarakaretsaka aho izao.
Jack: Aza malahelo fo. Tsy ny nofinofisinao no nahatonga anao hitady cab. Fa raha manana fiaviana matihanina tsara ianao, na ho ela na ho haingana dia hahazo asa amin'ny sehatra manokana anananao. Manana resume ve ianao?
Adama: Eny, manana izany aho.
Jack: Azonao asehoy ahy ve ity? Sendra niasa tao amin'ny sampana mpiasan'ny orinasa lehibe iray aho.
Adama: inty io.
Jack: Ity karazana resume ity dia tsy hahazoanao asa avo lenta. Ny orinasa lehibe dia mahazo 300 eo ho eo indray isan-kerinandro. Tsy miraharaha ny 290 amin'izy ireo izy ireo. Peter: Inona no anton'izany?
Jack: Betsaka ireo mpihaza asa antsipirihany manavesatra izay tsy isaina. Amin'ity famerenanao ity, ireo teny sy anarana rosiana lava ireo dia somary misafotofoto ho an'ny mpampiasa amerikana iray.
Adam: Fa ny tarehimarika asehoko dia tokony haneho traikefa matihanina, sa tsy izany?
Jack: Ie, ny an'ny corse. Mamaritra ny tenanao ho injenieran'ny elektronika ianao. Tsy ampy izany. Azo antoka fa manana fahalalana efa mandroso ianao, nefa inona no tanjonao? Karazana toerana inona no tadiavinao? Inona no fahaiza-manao mahafeno fepetra anao amin'ny asan'ny injenieran'ny fitaovana elektronika miaraka amin'ny Manhatten Electronics mba hilazana ohatra fotsiny? Tokony hilaza ny momba ny tanjakao sy ny zavatra niainanao izay hamela anao hanao io asa io ianao. Ny tanjakao dia tokony homena toerana bebe kokoa. Ny fampahalalana hafa dia tokony hajanona.
Adama: Indraindray dia sarotra kokoa ny manapa-kevitra hoe inona no tokony hamafisina ary inona no hialana.
Jack: Ny tena mahaliana ny mpampiasa dia ny zavatra azonao atao ho an'ny orinasa. Ampidiro ny fampahalalana izay mampiseho fa ianao no olona mety amin'ilay asa, avelao izay mety hanome antony ny mpampiasa anao handalo anao.
Adama: Fa ahoana ny tsy fisian'ny traikefa amerikanina? Sakana lehibe iray ahazoana asa izany.
Jack: Raha mahatsapa ny mpampiasa fa ianao no olona mety amin'ny toerana manokana dia hanome fotoana anao izy. Fantatro fa vitsivitsy ny Rosiana mitazona toerana ambony. Manorata karazana resume hafa ary asehoy ahy.
Adama: misaotra betsaka
Jack: tongasoa ianao. Antsoy aho raha vantany vao vonona ny resume.